Amakhulu ayayifulathela iLibya - Bayede News
Amakhulu abafuduki nababaleki balinde ngaphandle kwesikhungo se-United Nations (UN) eTripoli ngeSonto befuna usizo lokweqa eLibya ngemuva kwalokho amaqembu azolekelela akubize ngokuthi ngumkhankaso onodlame lapho kwaboshwa khona izinkulungwane kwathi abanye badutshulwa.
Abokufika bathi babhekane nokuhlukunyezwa nodlame ezweni elinokuthula okuncane iminyaka eyishumi, kepha seliphenduke indawo yokuhamba yabantu abafuna ukufika e-Europe befuna impilo engcono.
“Asinacala ngalutho ngaphandle kokufuduka ezweni lethu… kodwa siphathwa njengezigebengu hhayi njengababaleki,” kusho uMohamed Abdullah, oneminyaka engama-25 waseSudan. Uthe washaywa futhi wahlukunyezwa ngesikhathi evalelwe ezikhungweni ezinhlanu ezehlukene eLibya, nokuthi wayengenandawo yokuyocasha noma yokudla.
Amabutho ahlomile eTripoli aqale uchungechunge lokuboshwa kwabantu abaningi ngesonto eledlule, abophe abantu abangaphezu kwe-5 000 ezikhungweni ezigcwele ngokweqile njengoba amaqembu osizo namalungelo ezwakalisa ukukhathazeka kwawo. NgoLwesihlanu, onogada abasesikhungweni babulale okungenani abafuduki abayisithupha lapho njengoba ukuminyana kwaholela ezinxushunxushwini, kusho uphiko lwezokufuduka lwe-UN.
Abantu abaningi abebelinde ngaphandle kwesikhungo se-UN eTripoli, abanye belele ngasemwaqeni, balimele, bebhandishwe emakhanda, emilenzeni noma ezandleni. Abanye babehamba ngezinduku kuphela noma ngosizo lwabangani. Bakhulume ngendlala, ukuphelelwa yithemba nokuhlukunyezwa. “Ngashaywa futhi ngaphoxwa kakhulu ejele. Abaningi bashayiwe futhi bahlukunyezwa,” kusho uMatar Ahmed Ismail, oneminyaka engama-27, waseSudan.
UHulumeni Wobumbano Lukazwelonke eLibya uthe; “Ubhekene nodaba oluyinkimbinkimbi efayeleni lokufuduka ngokungemthetho, njengoba limelela inhlekelele yabantu ngaphezu kwemiphumela yezenhlalo, ezepolitiki nezomthetho kuleli nakwamanye amazwe”.
Abasolwa kwelikaBobo bafuna kuxegiswe imibandela yebheyili
Inhlangano yababaleki engaphansi kwe-UN i-UNHCR ithe izama ukusiza abantu abalinde kulesi sikhungo futhi yanxusa izixuku ezazikhona ukuthi zihlakazeke ukuze ikwazi ukusiza labo abasengozini enkulu. Le nhlangano iphinde yabika ukuthi seyikulungele ukusiza ngezindiza ezisiza abantu eziphuma eLibya. UNadia Abdel Rahman wafika eLibya eminyakeni emithathu edlule esuka e-Eritrea edlula eSudan nomyeni wakhe, indodana yakhe nodadewabo, umlamu wakhe nomshana wakhe, benethemba lokufika olwandle lwase-Europe.
Uthe umyeni wakhe ubanjwe yizigebengu ezifuna inhlawulo kodwa zambulala yize ekhokha. Umlamu wakhe ushonele olwandle ngesikhathi ezama ukuwela. Uboshwe ngesonto eledlule emkhankasweni wokulwa, uthe. “Sifuna into eyodwa kuphela, okungukuthi asifuni ukuhlala eLibya,” esho.
UMousa Koni, oyilungu loMkhandlu kaMengameli waseLibya onamadoda amathathu, osebenza njengenhloko yesikhashana yezwe, ngoMgqibelo uthe ungenelele noMnyango Wezangaphakathi “ukuqeda lokhu kuhlupheka”.